FIHODINANA FAHAROA : Mandeha sahady ny fingampingana mahazo ny Kandidà Andry Rajoelina
Tsy kely làlana ny ratsy. Miezaka hatrany ireo mersenera ara-politika manao ny fomba rehetra hoentina handotoana ny Kandidà Andry Rajoelina amin’izao fiatrehana ny fihodinana faharoa izao. 3 décembre 2018
Araka ny tetiandrom-pifidianana mifanaraka amin’ny voalazan’ny lalàna dia rahampitso no hanatanteraka ny fampielezan-kevitra hiatrehana ny fihodinana faharoa ireo kandidà miisa roa. Mbola tsy manomboka akory anefa izay fandresen-dahatra ny vahoaka Malagasy izay dia efa mandeha sahady ny fingampingana ataon’ireo mpifaninana ara-politika aminy mba hoentina hanomezana endrika ratsy ny Kandidà Andry Rajoelina, laharana faha-13. Ankoatra ny fanaratsiana mihoa-pampana mihatra aminy any anatin’ny tambajotra serasera dia ampiasain’ireo olon-tsy fantatra ihany koa ankehitriny ny finday.
Miparitaka ny hafatra fohy izay miendrika praopagandy ho an’ny Kandidà Andry Rajoelina ary voalaza ao anatin’ilay hafatra fa raha manaparitaka an’io hafatra io amin’ ny olona miisa roapolo ianao dia mahazo lelavola mitentina valo alina Ariary. « Fa ny Fitiavana no lehibe indrinara. Andry Rajoelina. Aparitaho amin’ny olona miisa 20 ity hafatra ity dia hahazo vola mitentina 80 000 Ariary ianao”, io ny endrik’ilay hafatra miparitaka. Tsy fantatra hatreto hoe iza marina no tena ao ambadiky ny fanaparitahana an’io hafatra io. Mazava ho azy fa ny hamotika ny Kandidà Andry Rajoelina mba hahafahana manenjika azy ho manao fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana no tanjona amin’izany.
Tao anatin’ny roa herinandro izay no nanomboka niparitahan’io hafatra io, ka olona avy any amin’ny distrikan’i Miarinarivo iny no anisany nitaraina ho nahazo izany. Ny trangan-javatra tahaka izao dia iaraha-mahalala fa tafiditra ao anatin’ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izay voararan’ ny lalàna, tafiditra ao anatin’ny fividianana safidim-bahoaka ihany koa izay voararan’ny lalàna. Tsy mikely soroka araka izany ireo mersenera ara-politika manao ny ezaka rehetra handotoana ny Kandidà Andry Rajoelina.
Endrika fisolokiana bevava ihany koa. Tsy vao sambany anefa fa efa hatramin’ny fihodinana voalohany no efa nisy ny trangan-javatra tahaka izao, tsy tamin’ ny alalan’ny finday ihany fa nisy mihitsy aza ireo nahavita namorona gazety boky kely mba hanaratsiana ranoray ny kandidà Andry Rajoelina. Ny mahagaga dia ireo heverina ho mpandray anjara amin’ny trangan-javatra tahaka izao no mihazakazaka mametraka fitoriana eny amin’ny HCC rehefa tonga ny fotoana. Ilaina ny fandraisan’ andraikitra avy amin’ireo orinasan-tserasera voakasika, ny vahoaka Malagasy ankilan’izay, no mila mitana hatrany ny fahamailoana mba tsy ho voarebirebin’ireo mersenera politika manoloana ny trangan-javatra tahaka izao.